Arabia Saodita - Wikipedia
I Arabia Saodita dia firenena ao Azia. Ny renivohiny dia Riyadh. Ny tanàna lehibe indrindra dia Riyadh. 2 149 690 km2 ny velarantaniny ary 29 195 895 ny isan' ny mponiny araka ny fanisana natao tamin' ny 2012. Ny faritr'ora dia +3.
Sainan'i Arabia Saodita
Saritanhy maneho an' i Arabia Saodita eto amin' izao tontolo izao
Arabia Saodita no firenena lehibe indrindra any Atsinanana Afovoany, ary firenena faharoa lehibe indrindra amin' ny Tontolo Arabo. Izy io dia manamorona an' i Jordania sy Iràka any avaratra, i Kôety any avaratra-atsinanana, i Katara, i Bareina ary ny Emirata Arabo Mitambatra any atsinanana, i Ômàna any atsimo-atsinanana ary Iemena any atsimo; misaraka amin’ i Ejipta sy Israely any avaratra-andrefana amin' ny Hoalan' i Aqaba izy io. I Arabia Saodita no hany firenena manana morontsiraka manamorona ny Ranomasina Mena sy ny Hoala Persika, ary ny ankamaroan' ny faritra misy azy dia ahitana efitra maina, tany iva, lemaka, ary tendrombohitra. I Riyadh no lehibe indrindra sady renivohiny, ary io firenena io no misy an' i Maka (na Lameka) sy Medina, tanàna roa masina indrindra amin' ny finoana silamo.
I Arabia talohan' ny silamo, faritany izay mandrafitra an' i Arabia Saodita amin' izao andro izao, no toerana nisy kolontsaina sy sivilizasiona fahiny; ny tantaran' i Arabia Saodita dia mampiseho ny sasany amin' ireo soritra voalohany indrindra amin' ny asan' olombelona eto amin' izao tontolo izao. Nipoitra tany Arabia Saodita ny fivavahana faharoa lehibe indrindra eran-tany, dia ny Islamo. Tany am-piandohan' ny taonjato faha-7, ny mpaminany silamo Mohamady dia nampiray ny mponin' i Arabia ary namorona pôlitika ara-pivavahana islamika tokana. Taorian' ny nahafatesany tamin' ny taona 632, dia nanitatra haingana ny faritany teo ambanin' ny fitondran' ny Miozolmana tany an-dafin' i Arabia ireo mpanaraka azy, ka naharesy faritany midadasika sy tsy nisy toy izany (avy amin' ny Saikinosy Iberiana any Andrefana mankany Pakistàna ankehitriny any Atsinanana) tao anatin' ny folo taona. Ny tarana-mpanjaka arabo avy any Arabia Saodita ankehitriny dia nanangana ny kalifa Rashidun (632–661), Umayyad (661–750), Abbasid (750–1517), ary Fatimid (909–1171), ary ireo tarana-mpanjaka maro hafa tany Azia sy Afrika ary Eorôpa.
Ny faritr' i Arabia Saodita amin' izao andro izao dia nahitana faritra efatra manan-tantara miavaka indrindra teo aloha: i Hejaz sy i Najd ary ny ampahany amin' i Arabia Atsinanana (Al-Ahsa) sy Arabia Atsimo ('Asir). Ny fanjakan' i Arabia Saodita dia naorin' ny mpanjaka Abdulaziz (fantatra amin' ny anarana hoe Ibn Saud any Andrefana tamin' ny taona 1932). Nampiray ny faritra efatra ho fanjakana tokana izy tamin' ny alalan' ny andiana fandresena nanomboka tamin' ny taona 1902 niaraka tamin' ny famaboana nhy tanànan' i Riyadh, fonenan' ny fianakaviany, dia ny Tranon' i Saud. I Arabia Saodita dia mpanjaka tanteraka hatramin' izay, tamin' ny fomba mahomby ny didy jadona nofehezin' ny Islamista. Andalana. Ny hetsika ara-pivavahana Wahhabi ultraconservative ao anatin' ny silamo sonita dia nofaritana ho "endri-javatra lehibe indrindra amin' ny kolontsaina saodiana", na dia nihena be aza ny tanjaky ny fivavahana tamin' ny taona 2010. Ao amin' ny Lalàna fototra, i Arabia Saodita dia manohy mamaritra ny tenany ho fanjakana arabo islamika manao ny finoana silamo ho fivavahana ôfisialy, ny fiteny arabo ho fiteny ôfisialy, ary i Riyadh ho renivohiny. I Arabia Saodita dia antsoina indraindray hoe "Tanin' ny Môske Masina roa" raha miresaka momba ny Al-Masjid al-Haram (any Lameka) sy Al-Masjid an-Nabawi (any Medina), ireo toerana roa masina indrindra amin' ny finoana silamo.
Hita tamin' ny 3 Martsa 1938 ny solitany ary narahina zavatra maro hafa tany amin' ny Faritany Atsinanana. I Arabia Saodita dia lasa mpamokatra solika faharoa lehibe indrindra eran-tany (aorian' i Etazonia) ary mpanondrana solika lehibe indrindra eran-tany, mifehy ny tahirin-tsolika faharoa lehibe indrindra eran-tany sy ny tahirin-tsolika fahenina lehibe indrindra. Ny fanjakana dia sokajiana ho toy ny toekarena mahazo vola be amin' ny Banky Iraisam-pirenena miaraka amin' ny tondrom-pampandrosoana ny maha-olona avo dia avo ary izy irery no firenena arabo tafiditra ao anatin' ny toekarena lehibe G20.
Ny fanjakana saodiana dia mandany 8 % amin' ny harin-karena faobeny amin' ny tafika (avo indrindra eran' izao tontolo izao aorian' i Ômàna), izay mametraka azy ho fahatelo lehibe indrindra amin' ny fandaniana ara-tafika eran-tany aorian' i Etazonia sy i Sina, ary mpanafatra fitaovam-piadiana lehibe indrindra eran-tany avy any ivelany. Tamin ny taona 2015 hatramin' ny 2019, nahazo ny antsasaky ny fanondranana fitaovam-piadiana amerikana rehetra tany Atsinanana Afovoany. Araka ny BICC, i Arabia Saodita no firenena faha-28 be miaramila indrindra eran' izao tontolo izao ary manana fitaovam-piadiana faharoa tsara indrindra amin' ny lafiny kalitao ao amin' ny faritra, aorian' i Israely. Tamin' ny faramparan' ireo taona 2010, nisy ny antso tsy tapaka amin' ny fampiatoana ny fivarotana fitaovam-piadiana any Arabia Saodita, indrindra noho ny filazana heloka bevava tany Iemena ary indrindra taorian' ny famonoana an' i Jamal Khashoggi. Nahasarika fanakianana ny fanjakana noho ny antony maro samihafa, anisan' izany ny anjara andraikiny tamin' ny ady an-trano iemenita, voalaza fa manohana ny fampihorohoroana islamika sy ny firaketany ratsy momba ny zon' olombelona, izay nasehon' ny fampiasana tafahoatra sy matetika tsy ara-pitsarana ny fanamelohana ho faty, ny tsy fandraisana fepetra sahaza amin' ny fanondranana olona an-tsokosoko, nhy fanavakavahana ataon' ny fanjakana amin' ireo vitsy an'isa ara-pivavahana sy tsy mino an' Andriamanitra, ary ny antisemitisma, ary ny fandikany henjana ny lalàna Sharia.
I Arabia Saodita dia heverina ho hery isam-paritra sy afovoany. Ny toekarena saodiana no lehibe indrindra any Atsinanana Afovoany ary faha-18 lehibe indrindra eran-tany. I Arabia Saodita koa dia manana ny iray amin' ireo mponina tanora indrindra eran-tany, ary eo amin' ny 50 %n'ny mponina 34,2 tapitrisa eo ho eo no latsaky ny 25 taona. Ho fanampin' ny maha-mpikambana azy ao amin' ny Filankevitry ny fiaraha-miasa amin' ny Hoala, i Arabia Saodita dia mpikambana mavitrika sy mpanorina ny Firenena Mikambana, ny Fikambanan' ny Fiaraha-miasa Islamika, ny Ligy Arabo, ary ny OPEC.
Lohahevitra momba an' i Arabia Saodita
Tantaran' i Arabia Saodita
Jeôgrafian' i Arabia Saodita
Mponina ao Arabia Saodita
Fiteny ao Arabia Saodita
Fivavahana ao Arabia Saodita
Kolontsain' i Arabia Saodita
Toekaren' i Arabia Saodita
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Arabia_Saodita&oldid=1040731"
Dernière modification le 3 Desambra 2021, à 14:27
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 14:27 ity pejy ity.